iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo - iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #415 by Colonelwing
ke yokulinganisa enenkcukacha nangokuchanekileyo-moya yokulwa wakha kuphuhliswa ze Microsoft Flight Simulator. The Superbug luvuthondaba kweminyaka phantse 10 umsebenzi abasusela FS2004, kwaye uyaqhubeka zixhaswe kukhupho rhoqo. Ukusuka zesiGqeba kwiinkqubo isixhobo, ukuba ngaba le moya benene, ukuba mhlawumbi kule yokulinganisa! The Superbug lo kuqala (kwaye kuphela) oyinyaniso 3-axis fly-by-wire yokulwa ezenzelwe FSX moya. Inkqubo yolawulo yeflaythi hayi "fly-by-wire-like" CAS, yinto inesakhono ngokupheleleyo, ngokupheleleyo ukulawula-mthetho-ixhomekeke inkqubo kisekiyo uqhuba enye (yimimiselo ezizimeleyo) neutrally-dayala-oluzinzileyo base yokubhabha. Inkqubo FBW nakumba imisebenzi yesiko khompyutha kunye nomlawuli moya 100%.
Ukuba ukhangela yakho sokwenene gciwane ,, Oku olu nye ufuna kubhabha iimpahla Gentelmen!
Iiforam Support VRS
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo - iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #423 by Gh0stRider203
nje uza shiya oku apha
Uhlobo lokugqibela: I-2 iminyaka ye-2 inyanga edlulileyo Gh0stRider203.
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #424 by Colonelwing
Haaaaaa ,, ngoko mfo yakho osisilumko eh !!!
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #429 by Gh0stRider203